मध्य युग संसारलाई नयाँ अवधारणा दिनुभयो। तिनीहरूलाई बीच, ठूलो ठाउँ "feudal", मनसायलाई feudal सिस्टम जस्ता ऐतिहासिक घटनाहरूको घटना र feudal वर्गीकरणका सम्बन्धित छ शब्द कब्जा गरिएको छ। के एक लामो भ्कगडा र कसरी महत्त्वपूर्ण यो मध्ययुगीन संसारमा थियो थाहा, नयाँ अवधारणाहरु ती समयमा गठन थिए कसरी हेर्न धेरै रोचक।
को आचरण को वर्गीकरणका
"लामो भ्कगडा" को अवधारणा मनसायलाई मध्ययुगीन संस्थाले प्रभुहरूका र vassals को उद्भव संग जोडिएको छ। आचरण बीच सम्बन्ध वर्गीकरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। यो माथि म तल्लो खडा धेरै देशहरूमा हुनत, राजा सामान्यतया थियो feudal सीढी ठूलो प्रभुहरूका-भूमि मालिक शक्ति कम्तिमा धेरै थियो, तर औपचारिक देश को शासक गर्न अधीनस्थ छैन।
प्रभु को आचरण को सानो सदस्यहरूलाई रिपोर्ट गर्ने ठूलो landowner-nobleman, भनिन्छ। तिनीहरूले बारी मा, vassals भनिन्छ।
सुरु feudal सम्बन्ध भएको Frankish शासक राख्नु कार्ल Martell को आठ शताब्दीमा। समयमा लामो भ्कगडा के हो? राजा को पहिलो कल मा युद्ध मा देखा पर्न प्रतिज्ञा लागि विनिमय आफ्नो vassals भूमि को पुरस्कार - आफ्नो भूमिका benefices गरिन्छ। तसर्थ, राज्यपाल प्रभु ( "वरिष्ठ") गर्न गरिएका र एक बाड आफ्नो जागीरदार भयो पाए।
शब्द को इतिहास
मध्ययुगीन फ्रान्स विश्वासी सेवाको लागि अनुकूल इनाम छैन पैसा (तिनीहरूले समयमा केवल एक सानो थियो) छ, तर सबैभन्दा मूल्यवान - भूमि। उहाँले राजा प्रभु देखि एक इनाम को रूपमा पाएको? Feudal, वा सम्पत्ति को सम्पत्तिको र यसलाई संलग्न किसान। तसर्थ, उहाँले देशमा देखि नियमित आय प्राप्त गर्न सकेन।
बारी मा, भाग हस्तान्तरण सक्छ जागीरदार उहाँलाई यस्तो आफ्नो जागीरदार भयो जो नाइट, को रूप पैटी शासकहरुले, स्वामित्व सक्दछन्। एकै समयमा मैडम आफ्नो अधीनस्थ गर्न अनुमति भूमि अधिकार गुमाउनु भएन। फलस्वरूप, एक बाड दुई वा बढी मान्छे स्वामित्वमा।
त्यसैले, के हो एक लामो भ्कगडा? यो भूमि स्वामित्व, अधिपति आफ्नो सैनिक सेवा वसूल को अवस्था मा आफ्नो जागीरदार bestowed जो। सन, र Fi fief: विभिन्न देशहरूमा नाम को आफ्नै संस्करण थियो। शब्द फिर्ता लेट ल्याटिन र जर्मन feodum fehu (सम्पत्ति) मिति र देखि (सम्पत्तिको)। पहिलो पटक, शब्द एक्स शताब्दीमा प्रयोग गर्न थाले।
एक जागीरदार को सम्पत्तिको प्रवेश गर्न, मैडम "investiture" भनिन्थ्यो जो एक Solemn अनुष्ठान, गरे।
स्वामित्व लामो भ्कगडा को सही लागि शुल्क
यहाँ स्वागत जागीरदार भूमि मा सम्पत्ति ससर्त लगाएका भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। उहाँले, अधिकार सक्छ प्रयोग र आफ्नो कर्तव्य अगाडि प्रभु मात्र विषय भएको लामो भ्कगडा फ्याँक्नुहोस्।
उहाँले सैन्य अभियान मा अधिपति साथ दिनु र यात्रा आफ्नो साथी हुन, महल प्रभु मा एकाइ राख्न, billeting लागि मांग महल वा स्थान मा प्रदान, कठिन परिस्थितिहरू, सल्लाह र पैसा मदत मानिन्छ थियो।
को जागीरदार यसको दायित्व पूरा गर्न असफल भयो कुनै पनि कारण को लागि, उहाँले गुनासो जमीनमा स्वामित्व को सही हराउछ घटनाको र त्यो अर्को धारण पारित वा प्रभुमा रह्यो।
को लामो भ्कगडा अर्को सुविधा यो केवल एक nobleman प्राप्त सक्ने थियो। धनी किसान वा धनी व्यापारीहरू यस्तो सही छैन।
लागि इलाका युद्धमा
प्राचीन समयमा र पछि मुख्य धन मध्य युग देशमा थियो। यसलाई स्वामित्व जसले, त्यो शक्ति, बल र शक्ति थियो। अधिक क्षेत्रहरूमा एक मानिसलाई belonged, अधिक प्रभावशाली उहाँले थियो। सबैभन्दा coveted र बहुमूल्य शिकार feuds थिए। Thrones को युद्ध अक्सर किनभने तिनीहरू देखा पर्यो। कि किनभने देशमा को मध्य युग मा भयो को संघर्ष भनिन्छ थिए "feudal लडाईंहरु," वा "कलह।"
आचरण बीच यी टक्कर अवधि को पहिचान भएको। आफ्नो कारण banal लोभ र इच्छा अक्सर उठ्दा मध्य युग मा अन्य मानिसहरूको भूमि र कानुनी घटना समृद्ध कसरी बन्दछ। यो भयो कि रूपमा विलियम विजेता म संग भयो अर्को एउटा देश स्वामित्व क्षेत्रहरूमा राजा। इङ्गल्याण्ड को राजा हुँदा उहाँले कुनै पेश छैन, तर बाँकी हुँदा नोर्माण्डी ड्यूक, एक जागीरदार थियो फ्रान्स राजा। यस्तो घटना र सारा देशहरू बीच सैन्य संघर्ष गर्न पुगे। संघर्ष पनि प्राय साधारण प्रभुहरूका बीच भयो। यसलाई कमजोर प्रतिद्वन्द्वीको 40 दिनको लागि एक युद्ध सुरु नभएको अधिकारीहरूले गर्न उजुरी गर्न सक्छन्, देश को एक भ्कगडा शासक को मामला मा कि आए।
त्यसैले, एक लामो भ्कगडा के हो? युरोप मा मध्य युग मा, आफ्नो जागीरदार गर्न तथाकथित स्वागत प्रभु आफ्नो सैन्य र अदालत सेवा सर्तहरू अन्तर्गत सम्पत्ति उतरा। युरोप मा समातेर भूमि यस प्रकारको को उपस्थिति पछि बल्ल पदानुक्रमित सिस्टम गठन भएको feudal सिस्टम को।
Natalya Kulikova: फोटो, जीवनी। के वर्षमा Kulikova Natalya (टिभी प्रस्तोता) जन्म भएको थियो?
को पेस्कोभ क्षेत्रमा मत्स्य पालन - यो के हो?
चिनियाँ बन्दागोभी kimchi को तयारी